Ungayithoba njani i-iOS 11 ukuya kwi-iOS 10.3.3 IPhone iindaba
Ungayithoba njani i-iOS 11 ukuya kwi-iOS 10.3.3
UIgnacio Sala | | iOS 10, iOS 11
Njengoko ndikuxelele kwinqaku lam elidlulileyo, i-iOS 11 ifunyenwe kwi-10,01% yezixhobo ezifanelekileyo iiyure ezingama-24 emva kokumiliselwa, inani eliye lahla kakhulu ngokuthelekiswa nokukhutshwa kweenguqulelo zangaphambili ze-iOS. Ukuba uhlaziye ngaphandle kokulinda ukubona izimvo zabanye abasebenzisi kwaye uyabona ukuba isixhobo sakho asisebenzi njengoko kufanelekile, unokuzimisela ukubuyela kwi-iOS 10.3.3 ngaphambi kokuba iApple iyeke ukusayina kwaye ulinde ukuba isungule. uhlaziyo lokuqala lwe-iOS 11, ngethemba lokuba iya kuzilungisa iingxaki eziboniswa zizixhobo zethu.
Okokuqala, kufuneka sikhumbule ukuba ukuba asikhange siwenze ucoceko olucocekileyo, oko kukuthi, ukuqala, ukucima yonke imixholo ye-iPhone yethu, yonke inkunkuma ebesiyifumene kwisixhobo sethu inokuchaphazela ukusebenza kwayo, ke Ngaphambi kokubuyela kuhlobo lwangaphambili lwe-iOS iApple eqhubeka nokusayina, kuya kufuneka siyithathele ingqalelo loo nto kwaye sivavanye. Kodwa ukuba akukho ndlela yokuphucula ukusebenza, siya kukubonisa indlela esingabuyela ngayo kwi-iOS 10.3.3
Indlela yokubuyela kwi-iOS 10.3.3 ukusuka kwi-iOS 11
Okokuqala kufuneka siye kwiwebhu ipsw.me y khuphela uguqulelo lwe-iOS 10.3.3 oluhambelana nesixhobo esifuna ukusifaka. Le fayile iya kuba nokwandiswa kwe-ipsw kwaye iya kuba ngaphezulu nje kwe-2 GB, kuxhomekeke kwisixhobo ekujoliswe kuso.
Emva koko siya kwi-iTunes kunye sidibanisa isixhobo sethu kwi-Mac okanye kwi-PC.
Kwinyathelo elilandelayo kufuneka siye kwifayile ye- icon emele isixhobo esiyixhumileyo, i-icon engaphakathi kukhetho esinikwa yi-iTunes.
Siya ngasekunene kwesikrini kwaye nqakraza Khangela uhlaziyo ngokudityaniswa kwezi zinto zilandelayo:
Ukuba yiMac: Kufuneka silucofe olo khetho ngeqhosha lokukhetha licinezelwe.
Ukuba siyayenza le nkqubo kwiWindows PC, kufuneka sicofe iqhosha lokushiya xa ucofa kuJonga uhlaziyo.
Okulandelayo iwindow iya kuvula apho kufuneka khona khetha ifayile ye-ipsw sikhuphele nje ukuqala inkqubo yokubuyisela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 10 » Ungayithoba njani i-iOS 11 ukuya kwi-iOS 10.3.3
I-ignacio miranda sitsho
Ngomhla wokuhlaziya i-IOS 11, i-iPhone 6 yam yayihamba kancinci kwaye sele ndiyenzile yonke into
Phendula u-ignacio miranda
Ngomhla wokuhlaziywa kwam kwi-IOS11, i-iphone 6 yam yayihamba kancinci, lilishwa lokwenyani kwi-OS entsha.
UJuan Fco sitsho
Ndine-iPhone yam ene-IOS 11 okokoko i-beta yokuqala kwaye khange icothe, yithi ndenza ufakelo olucocekileyo okwangoku xa kuphuma ingxelo yokugqibela, ukucoceka okucocekileyo ndiyathetha ukuyibuyisela kwaye ndingalayishi ikopi yogcino
Phendula kuJuan Fco
Ndihlala ndenza ukubuyisela kuhlobo ngalunye olukhulu lwe-iOS, kodwa ngoku iApple isusile i-iTunes AppStore kunye nenketho yokuvumelanisa .ipa kunye nezandi ezivela kwi-mac / pc (ngaphandle kokuba uzitsale ngesandla) inyani indinika ubuvila bokwenza Ukubuyiselwa okuya kubandakanya ukukhuphela i-54 gb kwisixhobo kwiiapps endinazo.
Kubonakala ngathi ababalanga kuloo nto. Ndiyavuma ukuba ndisebenzise iTunes ikakhulu ukukopa usetyenziso olukhutshelweyo kwi-iPhone ngaphandle kokuya nganye nganye kwiVenkile ye App, kodwa kubonakala ngathi ayisiyondlela ethandwa nguApple.
Ewe ewe, kulihlazo. Kubasebenzisi abanjengam abaqhele ukwenza oku kubuyiselwa kuguqulelo ngalunye olukhulu lwe-iOS kwaye sineeapps ezininzi, le nkqubo ayonwabanga ngoku (nangakumbi ukuba une-iPad okanye ezinye izixhobo ze-iOS ukongeza kwi-iPhone yakho)
Umbuzo, awunangxaki ngesicelo somculo? Ndihlaziye ii-iPhone 11s Plus kwi-iOS 6 kwaye akukho namnye kubo osebenzisa i-app yoMculo, xa ndiyivula ihlala ivulekile imizuzwana embalwa kwaye ivale. Sele ndizamile yonke into kwaye akukho ndlela izakundisebenzela.
ayindivumeli xa ndicoca isoftware indixelela ukuba ayihambelani
Ukuba ikuxelela lonto, ngekhe ukhuphele uguqulelo oluhambelana nemodeli yakho. Akukho esinye isizathu.
Ndiqaphele nge-IOS 11 ukuba xa ndenza ibluethoo kunye neWifi kwiziko lolawulo, zihlala zisebenza kuseto kwaye zisebenzisa ibhetri eninzi. IOS 11 buggy kakhulu.
Basasebenza ukukhusela nasiphi na esinye isixhobo ekunxibelelaneni kwaye ukuze xa usebenzisa iApple Watch okanye iiAirPods ungaphulukani nonxibelelwano onokuthi uqhubeke nokuzisebenzisa, ayongxaki yenguqulelo, yile nto ifunwa nguApple.
Abafana balumke ngokwenza oku, kwaye ndizama ukuya ezantsi kwi-ios 10 kuyo yonke le nkqubo, ukugqiba kwam indinike impazamo, iphone ayinakuhlaziywa kwaye iscreen siye samnyama kufuneka ndiyiqale kwimowudi yokubuyisela , Ngethamsanqa ndifumana ukhuphelo ukuba andilahlekanga lonke ulwazi lwam. ANDIKUKHUMBUZI UKWENZA
UCarlos M. sitsho
Molweni zihlobo zeforum, ndikhuphela nje kwi-ios 10.3.3, igqibelele. Ndine-iPhone 7 kwaye ndikhuphele uguqulelo lwe-GSM, kuba kwihlabathi liphela yaphosa impazamo. Ndizamile ios 11 kwaye imisebenzi emitsha ibonakala intle kakhulu, kodwa eyona nto indenze ndayeka ukuhlala yayikukusetyenziswa kwebhetri, ngokoluvo lwam kukusetyenziswa okuninzi. Ndiyathemba ukuba kuhlaziyo olutsha baya kusombulula umba wokusetyenziswa kwebhetri ephezulu. Okwangoku ndihleli ne-iOS 10.3.3, Imibuliso evela eCHILE .. !! AMANDLA ABAZALWANE BASE MEXICAN ABASETYEKA KULO NTLEKELE… AMANDLA AMAKHULU !!!!
Phendula uCarlos M
Mholo!! Ndinengxaki: ndiwalandele onke amanyathelo ngokuchanekileyo, kodwa xa sele ihlaziya, ndifumana ukuba kukho impazamo engaziwayo (impazamo 26) kwaye ayinakuqhubeka. Ke ukuhamba kweselfowuni kunye nebar yokuhlaziya kwaye kungaze kuqhubeke ... Nceda uncede, ndifuna ukuyilungisa kwaye andiyithandi kwaphela i-iOS 11 ... Ndine iphone 6. Enkosi !!
Molo! Ndisandul 'ukwehlisa i-iPhone 5 yam, kunye nohlobo lwe-GSM, kwaye ekugqibeleni kwaphawula impazamo. Ndihlaziyiwe iTunes, kunye nohlobo oluhambelana neselfowuni, andazi ukuba kwenzeke ntoni ... naziphi na izimvo? Ndiyacelwa ukuba ndibuyele kwi-iOS 10, kuba i-iOS 11 isebenze ngokundibulala kuyo yonke into.
UAndres Narvaez sitsho
Impazamo kukuba uyinike uhlaziyo kwaye ke iya kukunika impazamo, kuya kufuneka uyinike ukubuyisela ngokudityaniswa kwezitshixo, jonga ifayile kwaye yiyo
Phendula u-Andrés Narváez
Unyanisile, enkosi kakhulu! Ndinike ngokuhlaziya imiyalelo elandelayo, ngaphandle kokwazi ukuba kubuyiselwa ntoni. Iselfowuni yam enesidambisi silungile. QAPHELA nje ukuba ayindivumeli ukuba ndigcine ukhuphelo lwam nokuba luvela kwi-iTunes okanye i-iCloud kuba ingxelo yam efakiweyo (10.0.3) ibindala kunale yangoku (11), ke ngoko, ndilahlekelwe yiyo yonke into.
Into efanayo eyenzekileyo kulo mntu ubhale apha ngasentla yenzekile nakum, ibha yohlaziyo kwiscreen sam yahlala kude kube sekupheleni kwaye ayisuki apho. Ndiyaluxabisa uncedo.
UWilliam Barajas sitsho
Kulabo bane-Iphone 6S, yenza ukwehla ukusuka kwi-IOS 11 ukuya kwi-10.3.3 ukusuka kwiqhosha "Buyisela" ngokulandela indibaniselwano yesitshixo, kuba ukuba bayayenza ukusuka "Ukukhangela uHlaziyo", iya kuyiphosa "Impazamo engaziwayo 26" . Ukubulisa
Phendula kuWilliam Barajas
Ndikhuphele iifayile ze-ios 10.3.3, qhagamshela i-iphone kwi-itunes kwaye ndibeka uhlaziyo ngokulandelelana kwezitshixo, khetha ifayile endiyikhuphelileyo kwaye ikhutshelwe kwaye ihlaziywe ngokucacileyo ngaphandle kweengxaki (impazamo ayizange ivele kuyo yonke le nkqubo) ukuya kuthi ga ekugqibeleni xa ukulayishwa kwebar kugqityiwe, kwavela uphawu kwii-itunes ezithi "iphone ihlaziyiwe ngempumelelo kwaye iyaqala kwakhona." ungayinqamuli »kwaye ke ndilinde ixesha elide kodwa i-iPhone yahlala ngonaphakade kwiscreen seapile! kwaye ngoku andazi ukuba ndiyenze njani ukuba ivule ngesiqhelo! ndicela uncede! Enkosi!
(Ndiyicacisa yi-iphone 7)
Khange ulandele amanyathelo ngokuchanekileyo. Ngoku kufuneka ubeke ifowuni kwakhona kwimodi ye-DFU kwaye wenze onke amanyathelo.
Ndiphosakele phi? Nika ingqalelo kumanyathelo kungenxa yoko ndiyifumene ingumnqa. Ngoku ngokucacileyo
I fektri ndiyibuyisile, kwaye ndibuyisela ukhuphelo kuyo .. ubuncinci ibuyele kwi-ios 10.3.3 ebeyona nto bendiyifuna ..
Molo Lu ndifuna uncedo lwakho nceda, andikwazi
KUNGENAKUSETYENZISWA ukugxininisa ukuba ukuba ufakelo lwe- * .IPSW lwenziwa ngaphandle kokwenza ugcino olufanelekileyo lolwazi lwezixhobo, uthe ulwazi luya kulahleka, ngokwenkqubo, nje ukuba ifakiwe, iya kucela ikopi yokhuseleko kwaye yile ndlela ulwazi lwethu luya kukhuseleka ngayo.
Molo ndiyenzile nge-iphone 6 kwaye isebenze ngokugqibeleleyo
Sukwenza njengoko oku kuchazwa sesi sifundo, kuya kufuneka wenze i-backup kuqala nge-iTunes okanye nge-icloud kwaye emva koko ngesitshixo sokutshintsha kwi-PC sicofa ekubuyiseleni ukukhetha ifayile ebesikhuphele yona ngaphambili kwaye emva koko sibuyisela ikopi, imibuliso!
Ndine iphone 6 ene-ios 11.0.1 engabuyela kwi-10.3.3? nceda enkosi
Logama nje iApple iyisayina ewe
Molo, ungaba nejele 10.3.3? Kungenxa ye-ipad enenguqulo 9 efakiweyo. Enkosi
Lore pedraza sitsho
Ndihlaziye i-iPhone 6 yam ngo-11.0.0 emva koko ngo-11.0.1 ngoku nge-11.0.2 kwaye iselfowuni iyacotha, ukubhala kwi-wpp, fbk xa kubhalwa kucotha ... ndenza i-wifi kunye ne-bluethoot ... ndicela ye manzanita xa crest bazakukhupha uhlaziyo olunesaphulelo? Bonakalisa izixhobo zangaphambili kwinguqu yokugqibela kule meko i-8
Phendula uLore pedraza
Ndikhuphele i-iOS 10.3.3 yemodeli yam kwaye xa i-iTunes igqibile ithi kwenzeke impazamo nakwithiyori kwiphepha lokukhuphela le-iOS 10.3.3 ithi ayisebenzi kwi-iTunes. Ke ndiyibuyisela njani i-iPhone yam kunye ne-10?
Khange isebenze 🙁 ndifumana lo myalezo ulandelayo:
Impazamo 3194, Impazamo 17 okanye "Esi sixhobo asifanelekanga kulwakhiwo oluceliweyo"
Ngaba ukhona umntu osele ehlisiwe ukusuka kwi-ios 11 ukuya kwi-10?
Izolo ndizamile kwaye ndinempazamo ekufuneka ndiyibuyisile kuba yayixhonyiwe, ayizange iqhubele phambili kwaye yayiye-6s. Kuyabonakala ukuba ayisasebenzi
Uhlaziyo: Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, YI-RESTORE, HAYI KUHLAZIYA. Uvavanywe kwi-iPhone 6S yehliswe ukusuka kwi-11.0.2 ukuya kwi-10.3.3
Namhlanje ukhuphele u-10.3.3 we-iphone 6 kwaye kwiwebhu olu luvo lukwifayile yokukhuphela
Le firmware ayisayiniwanga. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukubuyisela kwi-iTunes. »
Into efanayo yenzekile emntwini kwaye wakwazi ukubuyisela ngendlela efanayo.
I-iphone 5s yam ayinakwenziwa isebenze nge-Wi-Fi, idatha yeselfowuni okanye ngenkqubo ye-itunes, umntu uyazi ukuba ndingenza ntoni, ndiyayihlaziya kwi-ios 11.0 kwaye kude kube ngoku andinakho ukuyisebenzisa.
Nanku kuphela komntu ongenalo nofifi nguwe. Ukuba ikunika impazamo engaziwayo, kungenxa yokuba wenze into engalunganga.
Masibone ukuba sifunda kakuhle kwaye senze izinto ezibonisiweyo kwinqaku kwaye asigxeki ukuba asazi ukuba senzeni.
Molo! Ndizama ukwehlisa i-iPhone 6 kwaye ibonisa impazamo 3194. Ndenze ulandelelwano oluphambili ngeShift + Buyisela kwaye ndakhetha ifayile kwi-10.3.3, iqhuba ibar ekhupha ulwazi kwaye iqhubeke ukuyifaka kwaye kwangoko impazamo isikrini.
Ndiyagula kukusetyenziswa kakhulu kwebhetri ... kancinci ndide ndayiqhela. Ndizakuzama ngale intsha ondithumela yona ndiyibone ukuba injani, kodwa ndingenza ntoni xa ndifuna ukubuyela ku-11?
Molo, ndiwalandele amanyathelo okwehlisa i-iphone 5s kwaye xa iphakheji ikhutshiwe nge-iTunes, indiphosela kwimpazamo enye: 3194. Inokuba ndenza ntoni ngokungalunganga? Sele ndimfakile ekubuyiseleni, kodwa akukho nto yenzekileyo.
UDaniel Carrasco sitsho
Molweni zihlobo .. Ngaba kusenokwenzeka ukubuyela kwi-ios 10.3.3? , Ndifumana ukhuphelo lwenguqulelo kwaye kunokwenzeka ukuba ndiyikhuphele, nangona kunjalo kubonakala ngathi ayinakuphinda ibuyiselwe kuba iapile yehliselwe kwiinguqulelo zangaphambili ze-ios…. Ndidinga uncedo! IPhone 5S yam yoyikeka, icotha kakhulu kwaye ibhetri ihlala ixesha elincinci. Nceda uncede ... naliphi na igalelo eliyakwenza. Ndiyabulisa!
Phendula kuDaniel Carrasco
Namhlanje ndizamile kwaye ngelishwa ayisebenzi, impazamo 3194 iyavela.I-Apple sele ikhubazekile oku kunokwenzeka kuba oko inkampani ikulindeleyo kukuba sonke sithenge i-iphone entsha. 🙁
Phendula kumsebenzisi we-iphone
Molweni bafana ndisifumene isisombululo, nditshintshela ku-Android kuba ekuphela kwento abayifumanayo yile kukusishiya iiterminal ezingalunganga kwaye basinyanzele ukuba sithenge enye, sele bandidlisile kodwa sele belwenzile utshintsho.
UCarl Carl 77 sitsho
Ndine-iphone 6 kunye kwaye ndifuna ukubuyela kwi-iOS 10.3.3 kodwa iphepha lokukhuphela lithi: Le firmware ayisayiniwanga. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukubuyisela kuyo kwi-iTunes.
Ucebisa ntoni, ngaba ndiyaqhubeka nenkqubo okanye hayi?
Phendula u-carl 77
Molo, ndine-iphone 6 ehlaziya kwi-ios 11 kodwa iyacotha. Isisombululo sam yayikukutshintsha ibhetri entsha inepesenti ephezulu yebhetri kunye nomcimbi ozinzileyo. Iprosesa sele ivuliwe kwaye ine-ios11 ngaphandle kweengxaki.
U-Luis Miguel Rozo F. sitsho
Ndine-6 Gb IPHONE 64 kwaye ihlaziyiwe kuphela kuhlobo lwe-11.3.1 kwaye yaqala ukuphazamiseka kwaye kwafuneka ndicime iWIFi ngesinye isihlandlo ukuyivula, emva koko ndaqala ukubhala kuphela ukuvula zonke izicelo nokubhala kuphela izitshixo, ndavula i-intanethi oko kukuthi, NDANDINOMSEBENZI!. Sele ndiyivule kwakhona kuba i-touch screen ayisebenzi. Ukuchukumisa okuqhelekileyo kubuyela emsebenzini kwaye ukuchukumisa, iqhosha kunye neminwe iphinda itshixwe kwakhona ukuba bayasebenza. Ndiza kuyikhuphela kwiinguqulelo ezimbini emva kwe-IOS 11.2.6 ye-Feb 19, 2018. Ndiza kukuxelela ukuba ilungisiwe
Phendula uLuis Miguel Rozo F.
Imidlalo emi-3 kunye neeapps simahla okanye kwintengiso yexesha elimiselweyo
Iiyure ezingama-24 emva kokukhutshwa kwayo i-iOS 11 ifunyenwe kwi-10% yezixhobo